Nhau - Kiyi yemota ine ina yakavanzwa basa, inogona kuponesa hupenyu munguva yekukurumidzira
Kiyi yemota ine ina yakavanzwa basa, inogona kuponesa hupenyu munguva yekukurumidzira
Just opena iyo yemusuwo musuwo
Mota zhinji dzinongogona kuvhura chete musuwo wecab kana iwe ukadzvanya kiyi iri kure, uye kana uchinge wadzvanya kaviri, mikova yese inogona kuvhurwa.
Vamwe vatyairi vanosimudza mota munzvimbo yekumisa yekure, Kana vakangovhura musuwo wekombi, vanogona kudzivirira vakaipa kuti vasakwira mumotokari kubva pachigaro chekuseri chemotokari kana pamusuwo wechigaro chepamberi chevapfuuri. Saka, iri basa rinoponesa hupenyu rinokosha zvechokwadi, handizvo here, kunyanya kune vatyairi vechikadzi?
Dzima hwindo remota
Mushure mekunge mota yamiswa, dzima injini wakananga, wobva wadhonza handbrake kuti uburuke mumota uende. Asi nekukasira ndichicheuka kumashure, wanikwe kanganwa kuvhara hwindo kana sunroof. Chii chauchaita panguva ino? Inofanira kunge iri kumashure mumotokari, batidza switch yemoto, vhara mawindo uye sunroof, uye wozokiya mota zvakare. Zvinonetsa here?
Muchokwadi, vanhu vazhinji havazive, mushure mekunge mota yadzimwa, chero ukadzvanya nekubata bhatani rekiyi ye Remote control kiyi, girazi uye sunroof yemota inozozvivhara otomatiki! Mune mimwe mota, chero bedzi remote control lock function ichishandiswa, ese mahwindo anomuka otomatiki nekuvhara. Iri basa rinonyanya kushanda, ivhangeri yaMartha, haha.
Tsvaga iyo mota nekukurumidza
Ukatadza kuwana mota yako nekukasira, kiyi yemota ine bhatani inogona kukubatsira. Semuenzaniso, paunoenda kunzvimbo yekutengesa uye kumisa mota yako munzvimbo yepasi pekupaka, unofanirwa kutsvaga pasi rese kana wadzoka kuzotora. Usavhunduke panguva ino. Kana iwe uchida kutsvaga mota yako, iwe unongoda kubaya bhatani bhatani pane kiyi yemota kuti mota iite ruzha. Izvi zvichaita kuti zvive nyore kuwana yako mota, asi kuve wakangwarira, Usashandise basa iri mune nguva yekubuda, nekuti inozokanganisa vamwe kana iwe uchiishandisa.
Mazhinji mamodheru kiyi yekudzora kiyi ine bhatani rekukubatsira iwe kuvhura trunk otomatiki. Kwenguva refu pindurudza bhatani bhatani bhatani (mune dzimwe mota, pinda-peta), hunde ichavhurika otomatiki. Kana iwe uchingobuda musupamaketi uye utakura mabhegi mahombe muruoko rwako, zvichave zvinoshanda kwazvo panguva ino, uye inogona kupa zvakawanda zviri nyore nekubata kamwe chete.